About Rikoooo (70 lohahevitra)
Ny zava-drehetra izay mahakasika Rikoooo
Ity Forum ihany no teny Anglisy. Fa frantsay Rikooo Forum, araho ity rohy ity: http: //www.rikoooo.com/fr/forum/
Misaotra anao ary Welcome.
Welcome New Mpikambana (24 lohahevitra)
Amporisihana ireo mpikambana vaovao mba hampahafantatra ny tenany eto. Fantaro iray hafa sy mizara ny mahaliana.
4 herinandro 1 andro lasa izay
soso-kevitra Box (42 lohahevitra)
Manana hevitra sy torohevitra mba hizara?
Aza saro-kenatra, ary Mitete antsika taratasy kely. Te-handre avy aminao, ary miezaka ny hanao ny toerana tsara kokoa sy namana mpampiasa kokoa ho an'ny vahiny sy ny mpikambana ho tahaka.
Re: BAe Avro RJ100 & BAe 146 ho an'ny FSX
1 volana 1 herinandro lasa izay
fanambarana (4 lohahevitra)
Official Fanambarana avy Rikoooo sy ny ekipa
1 taona 1 volana lasa izay
Flight Simulators Forums (321 lohahevitra)
Miresaka momba ny na inona na inona manodidina ny favoris sidina simulators
FSX - FSX Wiki puzzle.svg (202 lohahevitra)
Welcome FSX mpampiasa
Re: Plane et in FSX
17 ora 34 minitra lasa izay
FS2004 (13 lohahevitra)
Welcome FS2004 mpampiasa
6 volana 2 herinandro lasa izay
Prepar3D (106 lohahevitra)
Tongasoa eto Prepar3D mpampiasa
Re: fitaratra manga
3 andro 13 ora lasa izay
X-Plane (No lohahevitra)
Tongasoa eto X-Plane mpampiasa
Re: X-Plane Vonjeo
2 volana 1 herinandro lasa izay
Media (27 lohahevitra)
Zarao ny tsara indrindra simulator sary sy lahatsary eto amintsika.
sary (6 lohahevitra)
Zarao ny sary nalaina tao amin'ny fiaramanidina simulator etỳ amintsika.
FS 2004, mbola ambony
1 taona 11 volana lasa izay
Videos (21 lohahevitra)
Io no fitoerana hamoaka ny lahatsary nalaina ao amin'ny fiaramanidina simulator, anie no mba mamorona.
1 volana 4 herinandro lasa izay
Hangar Talk (27 lohahevitra)
Miresaka momba ny (saika) na inona na inona, raha mbola tsy misy izany resaka goavana, ary tsy mifanaraka amin'ny zana-sehatra fiadian-kevitra hafa.
Fly feon-kira (No lohahevitra)
Inona no mihaino rehefa manidina?
Re: Ny Music Stream
2 taona 9 volana lasa izay
Inona ary aiza no manidina androany (2 lohahevitra)
Ianao fiaramanidina ho any mahaliana, na amin'ny zavatra mahaliana ao amin'ny fiaramanidina simulator? Avy eo, mizara izany aminay.
Vondron'olona vidina amin'ny AI Flight Planner sy Discord (Over 70 fiaramanidina) ... HAVE FUN
1 taona 8 volana lasa izay
Real fiaramanidina (25 lohahevitra)
Saratov Airlines nianjera
1 taona 9 volana lasa izay
Hafa sidina simulators (2 lohahevitra)
Toerana mba hiresaka momba ny sidina misy hafa simulators.
Flight Gear sidina simulator (No lohahevitra)
About FlightGear (No lohahevitra)
tsy misy lohahevitra
DCS ANDIAN-DAHATSORATRA (1 lohahevitra)
DIGITAL HAIADY simulator WORLD
Hafanàm-po an Combat simulator World (DCS World) dia maimaim-poana-ho-milalao lalao ady nomerika, mifantoka amin'ny simulation ny miaramila fiaramanidina.
DCS ANDIAN-DAHATSORATRA DIGITAL HAIADY simulator WORLD
BENCHMARK Sims (1 lohahevitra)
Falcon BMS "ankehitriny ny anarana ofisialy ny fiaraha-monina tany am-boalohany Mod ho an'ny voromahery 4.0.
Total ireo mpampiasa aterineto: 22 Ireo mpikambana sy 1454 Guests Online
AlphaHotel1997, Guitardude123567, Kenzinio, MARRARO, MaxPS1, Nénénounou, Walt, Youpi Who, aleedv, da.thom2, julianesteban, maxden, miansiantimaseovata, papy22, revmac, romaviron, savoy, teepicgamer73, tibgam
Legend: Site Administrator Global Moderator mpandamina voarara User Guest
Open Today: 0
Today Total Valiny: 0
Total olom-pehezin'ny: 447
Total Sokajy: 16
Yesterday Total Valiny: 4
Total Users: 182606
Latest Member: Peten46
Fotoana mamorona pejy: 0.275 segondra